Rohingya threatened after voting for NDPD; some citizens arrested, put in stocks, barred from polling stations, or fired upon before being forced to vote for the USDP(NDPD ပါတီကိုမဲပေးမှုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာများ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးထန်းချုပ်ခြင်းခံရ) | Burma Election Tracker
Rohingya threatened after voting for NDPD; some citizens arrested, put in stocks, barred from polling stations, or fired upon before being forced to vote for the USDP(NDPD ပါတီကိုမဲပေးမှုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာများ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးထန်းချုပ်ခြင်းခံရ) Posted in Buthidaung
Meanwhile, winning candidates from the NDPD could see their victories stripped from them as election officials attempt to alter the number of votes cast in their favour, saidapolitician from Buthidaung.
Reports have also surfaced that election officials have deemed many ballots cast in favour of the NDPD to be “spoiled” ballots.
ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မထောက်ခံသည့်အပေါ် မြို့နယ်အာဏာပိုင်တို့၏ အနိုင်ကျင့်မှုအား ရွာသားများက ပြစ်တင်စွပ်စွဲခဲ့ကြောင်း မောင်းတောမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဆိုသည်။
နယ်မြေ ၉ နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်စိန်ဝင်းက NDPD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးခဲ့သည့်အပေါ် ခြမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဘူးသီးတောင်ရှိ မဲပေးသူများမှဆိုသည်။ မဲပေးသူများနှင့်ပတ်သက်သော ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြစ်အပျက်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ စသည်တို့နှင့်ပက်သတ်သော အစီရင်ခံမှုများ ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း NDPD ပါတီသည် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောမြို့နယ်တို့တွင် ထောက်ခံမဲ ၈၀% ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြစ်လွတ်ကျေးရွာတွင် မဲပေးသူများသည် NDPD ပါတီကိုစားလှယ်လောင်းများကို ကိုမဲပေးရန် ကြိုးစားသော်လည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးရန် အတင်းအကြပ် စေခိုင်းခံရရာမှ မဲရုံစောင့်နှင့် မဲပေးသူတို့အကြား ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု မြစ်လွတ်ရွာခံတစ်ဦးမှပြောသည်။